မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို ၀မ်းနည်းစွာလိုက်ပို့ရင်းသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဈူးဈူးဈာန် – Cele Top Stars
မိခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကို ၀မ်းနည်းစွာလိုက်ပို့ရင်းသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကို ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ဈူးဈူးဈာန်
December 11, 2021 By admin2Knowledge
ချစ်လှစွာသောပရိသတ်ကြီးရေ ဈူးဈူးဈာန် ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေစတင်ခေတ်စားခဲ့တဲ့အချိန်ကတည်းက ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာပါဝဝင်ခဲ့သူပါ။ နောက်ပိုင်း ပရ်သတ်တွေအားပေးချစ်ခင်မှုကိူအပြည့်အဝရရှိထားတာပါ။မနေ့ကဒီဇင်ဘာလ၉ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့မိခင်ဟာ ဆုံးပါးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့နာရေးသတင်းကိုဝမ်းနည်းစွာပြောပြခဲ့တာပါ…။
ဒီနေ့မှာတော့မိခင်ကြီးရဲ့ နာရေးခရီးကိုလိုက်ပို့ရင်း”ဟိုးငယ်ငယ်လေးတည်းက Broken Family ကနေ သားအမိလေးနှစ်ယောက် ဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားပြီး ရုန်းကန်ရှင်သန်လာခဲ့တာ …အခုတော့မေမေဈူးကိုစိတ်ချသွားပီပေါ့နော် …. မေမေကောင်းရာမွန်ရာမှာ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အနားယူနေမယ်ဆိုတာဈူး ယုံတယ်နော်…ဈူး ကိုစိတ်ချနော်..အေးချမ်းပါစေမေမေ 🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဝမ်းနည်းစွာပြောလာတာပါ…။
Broken Familyအဖြစ်သားအမိနှစ်ယောက်ထဲ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဈူးဈူးဈာန် ကတော့ အခုဆိုတိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်မိခင်ကြီးဆုံးပါးသွားလို့ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ တကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာပါပဲနော်။ပရိသတ်တွေလည်း ဈူးဈူးဈာန် အတွက်အားပေးစကားပြောခဲ့ပါဦးနော်….။
ခဈြလှစှာသောပရိသတျကွီးရေ ဈူးဈူးဈာနျ ကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှစေတငျခတျေစားခဲ့တဲ့အခြိနျကတညျးက ဇာတျလမျးတှဲတှမှောပါဝဝငျခဲ့သူပါ။ နောကျပိုငျး ပရျသတျတှအေားပေးခဈြခငျမှုကိူအပွညျ့အဝရရှိထားတာပါ။မနကေ့ဒီဇငျဘာလ၉ရကျနမှေ့ာ သူမရဲ့မိခငျဟာ ဆုံးပါးသှားခဲ့တာဖွဈပွီး သူမရဲ့ မိခငျကွီးရဲ့နာရေးသတငျးကိုဝမျးနညျးစှာပွောပွခဲ့တာပါ…။
ဒီနမှေ့ာတော့မိခငျကွီးရဲ့ နာရေးခရီးကိုလိုကျပို့ရငျး”ဟိုးငယျငယျလေးတညျးက Broken Family ကနေ သားအမိလေးနှဈယောကျ ဘဝကိုခကျခကျခဲခဲကွိုးစားပွီး ရုနျးကနျရှငျသနျလာခဲ့တာ …အခုတော့မမေစြေူးကိုစိတျခသြှားပီပေါ့နျော …. မမေကေောငျးရာမှနျရာမှာ အေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့အနားယူနမေယျဆိုတာစြူး ယုံတယျနျော…စြူး ကိုစိတျခနြျော..အေးခမျြးပါစမေမေေ 🙏🙏🙏”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ဝမျးနညျးစှာပွောလာတာပါ…။
Broken Familyအဖွဈသားအမိနှဈယောကျထဲ ရုနျးကနျခဲ့ရတဲ့ စြူးစြူးစြာနျ ကတော့ အခုဆိုတိုငျပငျဖျောတိုငျပငျဖကျမိခငျကွီးဆုံးပါးသှားလို့ခံစားရတဲ့ ခံစားခကျြကတော့ တကယျကိုဝမျးနညျးစရာပါပဲနျော။ပရိသတျတှလေညျး စြူးစြူးစြာနျ အတှကျအားပေးစကားပွောခဲ့ပါဦးနျော….။
မောင်နှစ်မအရင်းလိုချစ်ခင်ရတဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာကျော်မျိုးအောင်ကို တန်ဖိုးကြီး လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ အဆိုတော်နီနီခင်ဇော်
မိသားစုအားလုံးကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီး (၆)လအကြာမှာ သူမရဲ့လက်ရှိစိတ်အခြေအနေကိုပြောပြလာတဲ့ ခွန်းဆင့်နေခြည်